I-Semalt Expert: Yiyiphi into oyifunayo?
Ukuba unomtsha ukukhangela ukuthengisa, mhlawumbi uye wakuva inqaku elithi " umxholo we-SEO ".
Esi sikhokelo samanje, esinikezwa ngu-Andrew Dyhan, uMphathi weNtengo kaMthengi we-12 (Semalt , uzimisele ukuphendula imibuzo emithathu:
1. Yintoni umxholo wokuphucula injini?
2. Ziziphi iintlobo zokuquketwa kwenjini yokukhangela injini?
3. Yintoni yindlela yam yokukhangela yokucwangcisa injini?
Yintoni enomxholo we-SEO? Isiqulatho sokwenza usebenze kwiwebhusayithi yimiba eyenziwe ngenjongo yokuqhubezela ukukhangela kwewebhu.
Iintlobo ze-SEO umxholo
Umxholo wokuphuculwa kwewebhu ungabandakanya nayiphi na le ndelayo:
Ezi zinto ziyisiseko soshishino lwewebhu olusekelwe kwiwebhusayithi - set up wireless network small office.
Ibhulo enye yeyona ndlela efuna ukuyenza umgca wesiko umxholo we-website wokuphucula umxholo. Konke kuzo zonke iiblogi ezingenayo ziyongezwa kwaye zilungele ngakumbi ukudibanisa kunye namaphepha eempahla, ukuze zibe yindlela engavamile yokukhusela enye ingcali kwiwebhusayithi yakho.
Olu luhlobo lomxholo oyintloko oya kufumana kumaphephandaba amaninzi.
Uluhlu ngokwenene luyingxenye yecandelo, kodwa lugqithisa njengengqungquthela lenza kube nzima ukuba uhlolisise. Ezi zihloko zeempawu nazo zibonakala zibandakanya ngakumbi xa zifunyenwe kwizinto zokubuza okanye iiplani zokunxibelelana nge-intanethi
Isikhokelo sisona esongezelelweyo somxholo esichaza ngokucacileyo indlela yokwenza into.
Kuzo zonke, kukho iikopi ezimbalwa kwiwebhu xa kuthelekiswa namaphepha omxholo. Ngako oko, kunokuba kube lula ukubeka isigaba kwiziko eliphambili le-watchword enomdla ngokuzenza ividiyo ngaphandle kwinqaku.
Imiyalelo yokwakha i-SEO Content
Kwixesha elihle lokuba unikezele umxholo ngendlela engakhathali, ukuthembela nokucela ukuba ezinye zazo zibe zikhundla ezide, yithuba elihle lokungena kwaye ugxininise kwindlela yokwenza umxholo wokuqulunqwa kwewebsite ngokuzikhethela.
Nazi izigaba ezine ekubaleni nasekuhlambululeni umxholo wakho wokuphucula injini:
Cinga ngomxhasi wakho
Yazi abathengi bakho - inkqubo yakho yokuhlaziya inokukunceda ukuba ufumane ingqiqo ejulile yomthengi wakho. Cinga ngokuqesha abaphathi abaza kuthetha nabo bakho abaxhamli beendawo.
Yenza ikhalenda yokuhlela
Xa ucinga ukuba ngubani ojolise kuyo kwaye kutheni, ungaqala ukuyila ikhalenda yokuhlela, emele isimiso esilawulayo xa uza kusasaza umxholo omtsha kunye nokuba luhlobo luni loba luza kuba.
Sebenzisa iKhalenda yeGoogle (imbonakalo) - yabelana ngeshedyuli kunye neqela lakho elikhuthazayo. Uhlaziyo lweShedyuli lomlobi, ngoko bafumana isaziso xa kufikelelwe usuku olufunekayo.
Hlaziya uphinde uhlolisise
Ekugqibeleni, hlala kwii-analytics zewebhusayithi yakho. Qhawula ngokukhawuleza umxholo wakho wokuphuculwa kwenjini yokucinga ukuqonda okulungileyo kunye noko kufuneka kulungiswe.
Hlaziya impumelelo yakho ukwenzela ukuba ube nesimo sokuvuselela ezo zixhobo. Ngaba abaxumi bakho bafana namavidiyo? Ngelo xesha wenze iividiyo ezininzi!
Sindisa ixesha elithile lokuphucula nokuphucula umxholo we-SEO owodwa.